GO'AAN: Erling Haaland Oo Go'aan Ka Gaadhay Kooxda Uu U Wareegayo Kaddib Markii Borussia Dortmund Ka Hadhay Champions League - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaGO’AAN: Erling Haaland Oo Go’aan Ka Gaadhay Kooxda Uu U Wareegayo Kaddib Markii Borussia Dortmund Ka Hadhay Champions League
Weeraryahanka reer Norway ee Erling Haaland ayaa lagu soo warramayaa inuu go’aan ka gaadhay kooxda uu uga wareegi doono Borussia Dortmund oo wareega koowaad ee Group-yada kaga hadhay tartanka Champions League.
Erling Haaland ayuu soo maray toddobaad adag oo xulka qarankiisu ka hadhay koobka Adduunka 2022, sidoo kalena Borussia Dortmund ay meel aan laga filayn kaga baxday Champions League.
Laacibkan oo dhaawac ku maqnaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaan caawin kooxdiisa iyo xulkiisa midkoodna kulamadii ugu dambeeyey, hase yeeshee waxa uu doonayaa in sannad dambe aanay ku dhicin sidan oo kale.
Haaland ayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxa qandaraaska uu kula jiro Borussia Dortmund lagu burburin karayaa €75 milyan oo Euro, waxaana lala xidhiidhinayaa dersin kooxo ah, hase yeeshee isaguna waxa uu mar horeba sii go’aansaday kooxda uu doonayo inuu u ciyaaro.
Haaland oo Borussia Dortmund ay kasoo iibsatay RB Salzburg bishii January ee 2020, ayaa 69 ciyaarood oo uu u saftay waxa uu u dhaliyey 70 gool, kuwaas oo ay dheer yihiin caawin tiro badan oo uu raacsaday.
Manchester City, Manchester United, Liverpool, PSG iyo Barcelona ayaa dhamaantood danaynaya saxeexa 21 jirkan, hase yeeshee isagu dhamaantood niyadda kuma hayo, waxaana qalbigiisa ku jirta koox kale oo uu rumaysan yahay in qaab-ciyaareedkiisu kusoo baxayo, guulo waaweyna uu la gaadhi doono.
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa la sheegay in Erling Haaland uu mar horeba go’aansaday inuu u ciyaaro, waxaanu go’aankiisa la wadaagay wakiilkiisa Mino Raiola.
Benta kadayaa dadka sulaburg bu ka yimi
VAR VAR VAR says:
RB Salzburg soo sida looma dhihin mise koox kalaa ka hadleysa adigaaba ila qaldan oo magaca koozda si kale u soo qoray (sulaburg) magac kooxdee waaye ma noo sheegi kartaa
waaw aad iyo aad aad buu udookh fiican yahay mar haduu doortay inuu u wareego Realmadrid waayo waa koox wayn oo uu ku gaadhi karo dhamaan hadaf kasta oo uu leeeyahay
Harland Madrid ayuu uqalmaa.wuuna kusoo baxayaa waxkasta madrid bay yaalan lacag iyo kubadba